American Kamasutra (2018) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
American Kamasutra 13 Dec 2018
N/A 2018 88 min 18+
Ashlynn Yennie, Brent Harvey, Justin Berti, Kevin Nelson, Nika Khitrova, Richie Calhoun, Sara Luvv, Spike Mayer, Valerie Baber, Victoria Levine
အကျရျှလဆေိုတဲ့ ကောငျမလေးဟာ လိငျကိစ်စမှာ မသာမယာဖွဈနတေဲ့သူပါ၊ ရညျးစားရှိနပေမေယျ့ ရညျးစားက သူကိစ်စပွီးအောငျပဲ လုပျပွီး အကျရျှလကေို ဂရုမစိုကျပါဘူး။
အဲ့တာနဲ့ သူတို့လမျးခှဲခဲ့ကွပွီးတော့ အကျရျှလဟောသူ့ သူငယျခငျြး ဂြူလီ ရှိရာကို ပွောငျးလာခဲ့ပါတယျ။ သူငယျခငျြးအိမျမှာ ဒိုငျလနျဆိုတဲ့ ကောငျမလေးတယောကျလဲ ရှိနပွေနျပါတယျ။
သူငယျခငျြးအိမျမှာနေ ကျောဖီဆိုငျမှာ အလုပျဝငျလုပျရငျး ကျောဖီဆိုကျက ကောငျလေးနဲ့ဘာလိုလို ထပျဖွဈပါတယျ။ ဒါမယျ့ ကျောဖီကောငျလေးကလဲ သူ့ကို စိတျကနြေပျအောငျ မစှမျးနိုငျပါဘူး။
တဈနတေ့ော့ ဒိုငျလနျရဲ့ အပွာစာအုပျ တဈအုပျကို ယူဖတျမိပါတယျ
အဲ့အပွာစာအုပျကတော့ ထူးဆနျးစှာ သူ့ကို စိတျကနြေပျစခေဲ့ပွီးတော့ စာရေးဆရာ နိုလနျကိတျကို စိတျဝငျစားခဲ့ပါတယျ
တနမှေ့ာတော့ သူငယျခငျြး ဂြူလီရဲ့ မှေးနပှေဲ့ကနတေဆငျ့ အိလိယကျ တဖွဈလဲ နိုလနျကိတျနဲ့ အမှတျမထငျသိကြှမျးမိရာကနဖွေငျ့ ……
အပွာကားမဟုတျဘဲ drama ပိုငျးပါပွီး စကားလုံးကွမျးတဲ့ဇာတျကားဖွဈပွီး lesbian, bdsm နဲ့ အိမျထောငျရေးအကွောငျးတှကေို ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျလမျးဖွဈပါတယျ။ 18+ အခနျးတှေ မပါဝငျပမေယျ့ စကားလုံး ကွမျးတမျးမှူကွောငျ့ ဖွဈနိုငျရငျ တိတျတိတျဆိတျဆိတျ ကွညျ့သငျ့ပါကွောငျး ….
အက်ရ်ှလေဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ လိင်ကိစ္စမှာ မသာမယာဖြစ်နေတဲ့သူပါ၊ ရည်းစားရှိနေပေမယ့် ရည်းစားက သူကိစ္စပြီးအောင်ပဲ လုပ်ပြီး အက်ရ်ှလေကို ဂရုမစိုက်ပါဘူး။
အဲ့တာနဲ့ သူတို့လမ်းခွဲခဲ့ကြပြီးတော့ အက်ရ်ှလေဟာသူ့ သူငယ်ချင်း ဂျူလီ ရှိရာကို ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ ဒိုင်လန်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်လဲ ရှိနေပြန်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းအိမ်မှာနေ ကော်ဖီဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ရင်း ကော်ဖီဆိုက်က ကောင်လေးနဲ့ဘာလိုလို ထပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမယ့် ကော်ဖီကောင်လေးကလဲ သူ့ကို စိတ်ကျေနပ်အောင် မစွမ်းနိုင်ပါဘူး။
တစ်နေ့တော့ ဒိုင်လန်ရဲ့ အပြာစာအုပ် တစ်အုပ်ကို ယူဖတ်မိပါတယ်
အဲ့အပြာစာအုပ်ကတော့ ထူးဆန်းစွာ သူ့ကို စိတ်ကျေနပ်စေခဲ့ပြီးတော့ စာရေးဆရာ နိုလန်ကိတ်ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်
တနေ့မှာတော့ သူငယ်ချင်း ဂျူလီရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကနေတဆင့် အိလိယက် တဖြစ်လဲ နိုလန်ကိတ်နဲ့ အမှတ်မထင်သိကျွမ်းမိရာကနေဖြင့် ……
အပြာကားမဟုတ်ဘဲ drama ပိုင်းပါပြီး စကားလုံးကြမ်းတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး lesbian, bdsm နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းတွေကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ 18+ အခန်းတွေ မပါဝင်ပေမယ့် စကားလုံး ကြမ်းတမ်းမှူကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ကြည့်သင့်ပါကြောင်း ….
Ashlynn Yennie Brent Harvey Justin Berti Kevin Nelson Nika Khitrova Richie Calhoun Sara Luvv Spike Mayer Valerie Baber Victoria Levine
Ashlynn Yennie Boston Blake Brent Harvey Justin Berti Karla Kush Kevin Nelson Melissa Schumacher Nika Khitrova Richie Calhoun Sara Luvv Spike Mayer Valerie Baber Vicki Chase Victoria Levine
Option 1 storage.msubmovie.com 417 MB SD (480p)
Option2megaup.net 417 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 417 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 417 MB SD (480p)
Option5uptomega.com 417 MB SD (480p)
Option6datbu.com 417 MB SD (480p)
Option9datbu.com 1 GB HD
Option 10 uptomega.com 1 GB HD
Option 11 yuudrive.me 1 GB HD
Option 12 sharer.pw 1 GB HD
Option 13 storage.msubmovie.com 1.6 GB FHD EAC-3 5.1
Option 14 megaup.net 1.6 GB FHD EAC-3 5.1
Option 15 datbu.com 1.6 GB FHD EAC-3 5.1
Option 16 uptomega.com 1.6 GB FHD EAC-3 5.1
Option 17 sharer.pw 1.6 GB FHD EAC-3 5.1
Option 18 yuudrive.me 1.6 GB FHD EAC-3 5.1